३ बजे सम्म युरो कप हेरेका कपन स्थित घरमा काम गर्ने २७ वर्षीय युवकको शं’कास्पद मृ’त्यु, प्रहरीलाई नबोलाई घरधनीले अस्पताल पुर्याएको भन्दै आफन्त आ’क्रोसित ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 3, 2021 AdminLeaveaComment on ३ बजे सम्म युरो कप हेरेका कपन स्थित घरमा काम गर्ने २७ वर्षीय युवकको शं’कास्पद मृ’त्यु, प्रहरीलाई नबोलाई घरधनीले अस्पताल पुर्याएको भन्दै आफन्त आ’क्रोसित ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, १९ असार । काठमाडौँको कपन स्थित एक घरमा काम गर्ने युवकको शंकास्पद मृ’त्यु भएको छ । खार्देवी गाउपालिका वडा नम्बर – ९, राम्चे गाउका २७ वर्षीय गणेश भण्डारीको काम गर्ने घर मै गत असार १६ गते अन्दाजी बिहान ७ बजेको आसपास मृ’त्यु भएको आफन्तको दावी छ ।
बिहान राती ३ बजे सम्म युरो कप फुटबल हेरेका उनी ७ बजे अ’चेत भएको भन्दै घरधनी भारत थापाले मृ’तकका दाजूलाई फोन गरेको आफन्तले बताए । यता घरधनी भने गणेश भण्डारीले झु.ण्डिएर आ.त्मह.त्या गरेको र मृ’त्यु अगावै अस्पताल लगिएको दावी गरिरहेको आफन्तले जानकारी दिएका छन । उनलाई ग्र्याण्डी अस्पतालको एबुलेन्स झिकाएर अस्पताल लगिएको थियो ।
मृ’त्यु शं’कास्पद लागेपछि यतिबेला आफन्तहरुले घरधनी लगाएत उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन माग गरिरहेका छन । तर आफन्तको जाहेरी लिन प्रहरी नमानेको भन्दै कपनमा शुक्रबार साझ मृ’तक पक्षका आफन्तद्वारा केहिबेर नाराबाजी समेत भएको थियो । पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआई जाहेरी लिन नमिल्ने भन्दै प्रहरी पन्छिएको आफन्तको दावी छ ।
घ’टनामा आशं’का भएको भन्दै मृतकका आफन्तले प्रहरीलाई निस्पक्ष छानबिन गर्न अनुरोध गरेको छ । यतिबेला मृ’तकको श’व पोस्टमार्टमको लागी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा लागिएको छ । शुक्रबार साझ कपनमा गरिएको स्थलगत रिपोर्टको भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्ः